2018 ဘုတ်အဖွဲ့ကအရေးပါသောအ USMLE ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း [ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီတွင်ကြည့်ပါရှိရမည်!]
ဘုတ်အဖွဲ့ကအရေးပါသောအ USMLE ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဇန္နဝါရီလ 10, 2018 /2 မှတ်ချက်များ/အတွက် USMLE လေ့လာမှုပစ္စည်းများ /အားဖြင့် ဂျိမ်း Edge
ဘုတ်အဖွဲ့ကအရေးပါသောအ USMLE ထိုအဆင့်သည်ကျောင်းသားများကိုကြီးမားသောမေးခွန်းတွေဘဏ်များကမ်းလှမ်း 1, လှမ်း 2, နှင့်အဆင့်3စာမေးပွဲ. The practice questions come from expert sources along with detailed explanations to help students learn exactly why specific answers are correct or incorrect.
မေးခွန်းများကိုဖြေဒါမှမဟုတ်အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲယူသည့်အခါကျောင်းသားများသည်အချိန် Mode ကိုနှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Mode ကိုအကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, အားလုံးတစ်ဆစ်ခြင်းစျေးနှုန်းမှာ.
1. Timed အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲ
3. ရမှတ်နှိုင်းယှဉ် Tool ကို
2. အဘယ်သူမျှမမိုဘိုင်းလ် App ကို
လှမ်း 1, လှမ်း2& လှမ်း3စျေးနှုန်း:
ကျောင်းသားများကသူတို့ကိုစာမေးပွဲအပေါ်ဆက်ခံရန်ညာဘက်အရှိန်အဟုန်ရှာဖွေအပေါ်အလုပ်လုပ်ကူညီတစ်ခုလုံးကိုအလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများအတွက် timer နေရာမှာအပြင်တစ်ဦးစီတစ်ဦးချင်းစီမေးခွန်းတစ်ခု timer နေရာမှာတွေ့မြင်နိုင်သည်. ဘုတ်အဖွဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မေးခွန်းများကိုအခက်အခဲအဆင့်နှင့်စာမေးပွဲအပေါ်အမှန်တကယ်မေးခွန်းများကိုသည်လိုအပ်သောအချိန်နှစ်ခုလုံး simulate ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြတယ်. အမှန်တကယ်စာမေးပွဲအပေါ်အဖြစ်, မေးခွန်းတွေအကြားပြန်လည်နှင့်ထွက်ရွှေ့နှင့်သင်၏အဖြေကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကဖွင့်.
ဤအစီအစဉ်၏အမှန်တကယ်အကျိုးရှိသည်ကိုတစ်ခုတည်းအလေ့အကျင့်မေးခွန်းများအတွက်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်နှင့်အဖြေများလာ. ကျောင်းသားများအလေ့အကျင့်သည်အခွင့်အလမ်းများကိုမပြတ်လပ်ရလိမ့်မည်, လက်လှမ်းမီနှင့်အတူ 1,500 ထို USMLE အဆင့်သည်မေးခွန်းများကို 1, 900+ အဆင့်သည် 2, နှင့် 1,200+ ထိုအဆင့်သည်3စာမေးပွဲ. မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုဆေးသမားကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ရေးထားသော, သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ဝေသူများနှင့်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများဦးဆောင်ကနေလာ.
သင်အလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေကိုပြန်ဖြေတဲ့အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှုယူပါတယ်ပြီးနောက်, သင် USMLE စာမေးပွဲကိုယူပြီးအခြားကျောင်းသားများကသင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်. သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းအစီအစဉ်အပိုဆောင်းလေ့လာမှုသည်သီးခြားအလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေအကြံပြုဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်, သင်ပြန်လည်သုံးသပ်ကနေအများဆုံးအကျိုးရှိမည်အဲဒီဒေသတွေကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်.
BoardVitals ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးစီစာမေးပွဲကနေအနည်းငယ်အခမဲ့အလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကို access ကိုပေးသည်, ထို USMLE အဆင့်အခမဲ့မေးခွန်းလမ်းညွှန်2နှင့်အဆင့်3စာမေးပွဲ, အမျိုးမျိုးသောစာမေးပွဲယူသည်နှင့်အကြံဥာဏ်နှင့်အကြံပေးချက်များ. သူတို့ကအစ USMLE အဆင့် post3content Outline (USMLE ကနေ) သင့်ရဲ့အဆင်ပြေဘို့မိမိတို့ site ပေါ်တွင်.
ကိုယ့်မှာစျေးနှုန်း $79-$199, ဘုတ်အဖွဲ့ကအရေးပါသောအ’ prep သင်တန်းများကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်သူတို့၏အမျိုးအအနည်းဆုံးစျေးကြီး option ကိုဖြစ်ကြသည်. သူတို့က USMLE စာမေးပွဲတစ်ခုတင်းကျပ်လေ့လာမှုအစီအစဉ်မှတို့သည်ကြီးစွာသောဖြည့်စွက်များမှာ, တကယ်တော့, ဘုတ်အဖွဲ့ကအရေးပါသောအသင်သည်အခြားလေ့လာမှုပစ္စည်းများနှင့် တွဲဖက်. သူတို့၏မေးခွန်းကိုဘဏ်ကိုအသုံးပြုသူတို့ရဲ့ website တွင်အကြံပြုထားသည်.
*Save ကို 10% OFF Show Coupon
ဘုတ်အဖွဲ့ကအရေးပါသောအသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များကရပ်သင်လေ့လာနေသည့်အတွက်စာမေးပွဲမလွန်ဘူးဆိုလျှင်သင်တန်းများအခမဲ့တိုးချဲ့ subscriptions ကိုကမ်းလှမ်း. ခြေစစ်ပွဲ clients များသူတို့မူလကဝယ်ယူကာလ၏အရှည်သည်အခမဲ့ subscription ကိုရထိုက်ခွင့်ရှိပါတယ်. သင်ကဲ့သို့ရှည်သင်သည်သင်၏လက်မှတ်သို့မဟုတ်ဘုတ်အဖွဲ့စာမေးပွဲလွန်ဖို့လိုအပ်သကဲ့သို့ access ကိုဆက်လက်ရလိမ့်မယ်. ရုံသင်သည်သင်၏စာမေးပွဲမလွန်ဘူးကဖော်ပြသည်သောစာတစ်စောင်သို့မဟုတ်အကြောင်းကြားစာမိတ္တူတင်ပြရန်. ထို pass အာမခံချက်များအတွက်အပိုဆောင်းအသေးစိတ်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုများအတွက်ဘုတ်အဖွဲ့အရေးပါသောအဝက်ဘ်ဆိုက်မှာကြည့်ပေးပါ.
ဤရွေ့ကား prep သင်တန်းများလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေနှင့်ရှင်းလင်းချက်များနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်မေးခွန်းဘဏ်ကိုသီးသန့်င်ပါတယ်, နှင့်အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှု. သူတို့သည်ကစာမေးပွဲတစ်ခုယေဘုယျခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အရကူညီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောပို့ချချက်သို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကျောင်းသားများတခြားနေရာကိုကြည့်သင့်ပါတယ်.
မေးခွန်းဘဏ်မိုဘိုင်းဖုန်းများမှအလွယ်တကူအသုံးပြုပေမယ့်, ကျောင်းသားတွေလေ့လာမှုကြောင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေစေရန်မမိုဘိုင်း app ရှိပါတယ်. ကဒ်ပြားများ, တစ်ပိုခရီးဆောင်ဖက်ရှင်အတွက်ဂိမ်းသို့မဟုတ်အခြားပြန်လည်သုံးသပ်ပစ္စည်းတစ်ခုကောင်းအင်္ဂါရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်.
သင်အနေနဲ့စျေးနှုန်းမှာအမှန်တကယ်စာမေးပွဲမှမှန်ပေမယ့် format နဲ့အလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေအများကြီးရှာနေဆိုရင်တော့, ဘုတ်အဖွဲ့ကအရေးပါသောအ’ ထို USMLE အဆင့်သည်အွန်လိုင်း prep ရွေးချယ်စရာ 1, လှမ်း2CK နဲ့အဆင့်3စာမေးပွဲကောင်းတစ်ခုရွေးချယ်မှုများမှာ. သင်ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရွေးချယ်စရာရမည်မဟုတ်, သင်ပေးသောဆရာနှင့်အတူပို့ချချက်သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးများ, ဒါပေမယ့်သင်စစ်မှန်သောအရာနီးစပ်ဖြစ်ကြောင်းပထမဦးဆုံး-rate ကိုမေးခွန်းတွေနဲ့အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူအလေ့အကျင့်များများရလိမ့်မည်. Answering the practice questions and reviewing why specific answers are correct or incorrect is one of the best ways to prepare for the USMLE exams.
ဘုတ်အဖွဲ့အရေးပါသောအ USMLE ကိုခေါ်သွား!
1,500 USMLE အဆင့် 1 ဘုတ်အဖွဲ့ကပြန်လှန်မေးခွန်းများ
900+ USMLE အဆင့်2ဘုတ်အဖွဲ့ကပြန်လှန်မေးခွန်းများ
1,200+ USMLE အဆင့်3ဘုတ်အဖွဲ့ကပြန်လှန်မေးခွန်းများ
Time Mode ကိုနဲ့သုံးသပ်ချက်များ Mode ကို မှစ. ရွေးပါ
သည် access 1 လ: $79
သည် access3လများ: $129
သည် access6လများ: $199
အဆိုပါ USMLE စာမေးပွဲနှိပ်စက်
အကောင်းဆုံး USMLE အဆင့် 1 prep သင်တန်းများ
USMLE စာမေးပွဲများကို: ဒဏ္ဍာရီ, Overc များအတွက်အချက်အလက်နဲ့မဟာဗျူဟာ ...
အကောင်းဆုံး USMLE အဆင့် 1 Prep Study Materials
USMLE အဆင့်2CK့Prep သင်တန်းများ
https://crushtheusmleexam.com/wp-content/uploads/2014/11/BoardVitals.png 400 400 ဂျိမ်း Edge https://crushtheusmleexam.com/wp-content/uploads/2017/01/Crush-The-USMLE-Logo-300x120.png ဂျိမ်း Edge2018-01-10 22:00:002018-01-10 22:00:00ဘုတ်အဖွဲ့ကအရေးပါသောအ USMLE ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဇန္နဝါရီလ 4, 2017 တွင် 2:43 ညနေ
ဇန္နဝါရီလ 9, 2017 တွင် 2:46 ညနေ
-အသင်းကိုအဆိုပါ USMLE နှိပ်စက်ခြင်း
အဆိုပါဆွေးနွေးမှု join ချင်?
ခခြှေဲ USMLE ဆန်းစစ်ခြင်း Kaplan USMLE ဆန်းစစ်ခြင်း